Murashax Farmaajo oo kulan la yeeshay qeybaha kala duwan ee ururrada haweenka
Home / Qaraxyadii lagu weeraray Hotel Dayax
Ra’iisul Wasaarihii hore ee Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo oo ah murashax u taagan xilka Madaxweynaha ayaa maanta kulan uu la yeeshay qeybaha kala duwan ee ururrada haweenka ka sheegay in waxyaabaha caqabadda ku ah hana qaadka nidaamka dowlanimo ay kamid yihiin wada shaqeyn la’aan ka dhex jirta madaxda qaranka, musuq maasuqa lagu hayo hantida dadweynaha iyo ku tumashada dastuurka iyo shuruucda kale ee dalka u yaalla.
Mudane Farmaajo ayaa ku dhalliilay Madaxweynaha haatan xilka haya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud inuu aad u dhiirrigeliyay in dastuurka la baal maro isaga oo ku eedeeyay inuu 6 bilood oo aan sharciga waafaqsaneyn uu xafiiska sii joogo. Waxaa laga doonayay madaxweynaha ayuu yiri inuu dhawro dastuurka iyo shuruucda lagu heshiiyay.
Mudane Farmaajo ayaa yiri “Waxaad arkeysaan in Madaxweynaha uu xafiiska ku fadhiyo sharci darro muddo 6 bilood ah. Waxay ahayd in uu doorasho qabto bishii September ee sanadkii hore. Waxyaabaha dib noo dhigay ayay kamid tahay inaan sharciga la ixtiraamin.”